Contextual Targeting: Iwuli Brand Brand Na A Kuki-erughị Oge | Martech Zone
Nchekwa akara bụ ihe dị oke mkpa maka ndị na-ere ahịa na-aga n'ihu na ọnọdụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nke akụ na ụba ma nwee ike ime mgbanwe dị na azụmaahịa.
Sdị na-adọta mgbasa ozi mgbe niile n'ihi na ha na-apụta n'ọnọdụ ndị na-ekwesịghị ekwesị, yana 99% nke ndị mgbasa ozi na-eche banyere mgbasa ozi ha na-egosi na gburugburu nchekwa.
Enwere ezigbo ihe kpatara nchegbu
Nnyocha egosiwo mgbasa ozi na-egosi na ọdịnaya adịghị mma na-ebute na a 2.8 ugboro Mbelata na-eji ọkụ 'nzube isonyere ụdị ndị a. Ọzọkwa, ụzọ abụọ n'ụzọ atọ nke ndị na-azụ ahịa, bụ ndị gosipụtara na mbụ ebumnuche dị elu maka akara, enweghị ike ịzụta akara ahụ mgbe ekpughere otu ụlọ ọrụ mgbasa ozi na-egosi ọdịnaya na-ekwesịghị ekwesị; gbakwunyere echiche ndị na-eri ihe banyere akara ahụ gbadara ugboro asaa.
Ihe omuma ihe: Onye ohuru ohuru nke echedoro echedoro
Ozi ọma ahụ bụ, ịtụkwasị uche na gburugburu ebe obibi na-eme ka nchekwa nchekwa site na ịtụle ọdịnaya yana ewepu ntinye na vetikal na ọdịnaya echere na ọ ga-echedo. N'ezie arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-enwe ike ịhazi ụdị ọdịnaya niile dị na ibe, iji nye ezigbo ogo ogo 360 maka nkọwapụta asụsụ nke ibe ahụ.
Ngwaọrụ dị mma na-enye ohere maka ịbịaru ọfụma karịa ịkọwa okwu dị mfe, ma kwe ka ndị na-ere ahịa họpụta gburugburu ha chọrọ ịgụnye, yana nke dị mkpa, ndị ha chọrọ iwepu, dịka ọdịnaya site na iji okwu ịkpọasị, ịkpa oke agbụrụ, ndọrọ ndọrọ ọchịchị hyper, racism, toxicity stereotyping, wdg.
Dịka ọmụmaatụ, azịza dịka 4D na-eme ka mwepụ nke ụdị akara ndị a dị elu site na njikọta naanị na ndị mmekọ ọkachamara dị ka Factmata, na akara ngosi ndị ọzọ nwere ike ịgbakwunye iji mee ka nchekwa nke ebe mgbasa ozi pụta.
Yourdabere na gburugburu ebe obibi Ad gị?
Ngwaọrụ ezubere iche metụtara ọnọdụ nwere ike nyochaa ọdịnaya ma mee ka ị mara maka mmebi iwu nchekwa dị ka:
Ndọrọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị Hyper ma ọ bụ ajọ mbunobi ndọrọ ndọrọ ọchịchị
Ebumnuche Ebumnuche Na-enweghị Ederede
Advancedfọdụ gara n'ihu ihe omuma ndi ozo ngwaọrụ nwere ikike nyocha vidiyo, ebe ha nwere ike nyochaa ọdịnaya ọ bụla nke vidiyo, chọpụta akara ngosi ma ọ bụ ngwaahịa, mata akara ngosi dị mma, yana ederede ọdịyo na-agwa ya niile, iji nye ebe kachasị mma maka ịre ahịa n'ime na gburugburu ọdịnaya vidiyo ahụ. Nke a gụnyere, dị mkpa, etiti ọ bụla n'ime vidiyo ahụ, ọ bụghị naanị aha, thumbnail, na mkpado. A na-etinyekwa ụdị nyocha a n'ofe ọdịnaya na onyonyo, iji hụ na saịtị ahụ n'ozuzu ya.
Dị ka ọmụmaatụ, a akụrụngwa ezubere iche ngwá ọrụ nwere ike nyochaa a video na e nwere ihe oyiyi nke a biya biya, mata site na ọdịyo & video na ọ bụ a mma-mma gburugburu ebe obibi, na-agwa ndị ahịa na ọ bụ ihe kacha ọwa maka na ahịa ọdịnaya banyere biya ịpụta n'ihu ndị na-ege ntị dị mkpa.
Ngwaọrụ ochie nwere ike inyocha utu aha vidiyo ma ọ bụ ọdịyo naanị, ma adabaghị n'ime onyogho, nke pụtara na mgbasa ozi nwere ike kwụsị na ọnọdụ na-ekwesịghị ekwesị. Dịka ọmụmaatụ, aha vidiyo nwere ike ịbụ ihe na-adịghị ọcha ma were mma site na ihe eji eme ihe banyere okenye, dika Esi eme nnukwu biya agbanyeghị ọdịnaya nke vidiyo ahụ n'onwe ya nwere ike bụrụ ihe ekwesighi ekwesi, dịka vidiyo nke ndị na-eto eto na-eto eto na-eme biya - ugbu a mgbasa ozi na gburugburu ebe ahụ bụ ihe na-enweghị ahịa ọ bụla nwere ike imeli.
Otú ọ dị ihe ngwọta dị ka 4D ewuwo ụlọ ọrụ-nke mbụ na-azụ ahịa nke na-enyere ndị mmekọ teknụzụ aka ịhọrọ nkwụnye algọridim ha dị ka mgbakwunye agbakwunyere nke ezubere iche, yana ndị mmekọ dịka Factmata na-enye ụdị nchekwa site na ịkpa ókè agbụrụ, na-ekwesịghị ekwesị, ma ọ bụ ọdịnaya na-egbu egbu ma nwee ike itinye ya iji hụ nchekwa nchekwa. na ekwesiri ijikwa n'ụzọ ziri ezi.
Choputa ihe banyere ichota onodu n’ime akwukwo ohuru ohuru:
Atumatu Ebumnuche: Laghachi na Ọdịnihu nke Ahịa
Silverbullet bụ ụdị ọhụụ nke ọrụ ịre ahịa data-smart smart, nke enyere iji nye ndị azụmaahịa ike iji nweta site na ngwakọ pụrụ iche nke ọrụ data, ọdịnaya nwere nghọta, na mmemme. Ngwakọta anyị nke ọgụgụ isi na ahụmịhe mmadụ na-enye ihe ọmụma iji mee ka mgbanwe ahịa gị maka ọdịnihu.
Tags: nchekwa nchekwaclickbaitmgbasa ozi gburugburu ebe obibiihe omuma ndi ozohyperisanshipọchịchị ndọrọ ndọrọ ọchịchịngwa igweọlaọcha ọlaọchaechiche efu
Tim bụ onye ndu na - ahụ maka ndụmọdụ yana ihe karịrị afọ 20 na - arụ ọrụ na ntanetị ahịa na teknụzụ. N'ịchọsi ike banyere ịkwọ ụgbọala nke ndị ahịa na nsonaazụ azụmaahịa siri ike karị, Tim sonyeere Silverbullet dị ka GM nke Strategic Consulting na Disemba 2019.